Isitayela saseYurophu Amabele Amancane 157cm TPE Sex Doll Simona
I-TPE Sex Doll,Onodoli besitayela baseYurophu,Onodoli bezocansi abakhulu,B indebe onodoli bezocansi,Onodoli bezocansi abancane,Izithande Zothando
Londoloza 28% $ 1,958.02 $ 1,428.35
USimona wenza unyaka wokuqala enyuvesi. Unezinwele ezinde eziphuzi ezibushelelezi, amehlo amnyama nezindebe ezimnandi, ezinomswakama. Kungabonakala ngezibuko ezigqokwa ekhanda lakhe ukuthi uyakwazi ukufunda. Unekhono kwi-mathematics ne-physics, futhi unesikhashana sokubala amandla okuphindaphindeka kwamadijithi amathathu, futhi imiphumela yobuciko obukhululekile ayenelisi neze. Iphupho lekusasa ngumnikazi wesitolo noma i-barista noma ummeli.
Ubuntu bakhe bujabule ngokwengeziwe, kepha kunenkinga encane yokunganaki. Uthanda ukubizwa ngodade ngabanye. Lapho ezwa amagama athi "dadewethu", noma elele kangangoba iwashi le-alamu alivuki, uzokhuphuka ngokushesha. Ngoba idolobha langakubo liyibhikawozi, umdlandla wokwenza isinkwa unamandla ukudlula noma ngubani omunye, futhi isinkwa siyanezelwa kwimenyu. Kepha ngaphezu kwesinkwa, angikwazi ukwenza kahle ezinye izitsha, futhi uma ngenza isobho se-miso, umama uvinjelwa kakhulu.
Uhlu lokupakisha lukaSimona:
Ibhulogi: I-WM DOLLS
Ukuphakama: Amasentimitha angama-61.8 (157cm)
Isisindo: Ama-63.9 lbs (29kg)
I-Bust: Amasentimitha angama-26.8 (68cm)
Isinqe: Amasentimitha angama-18.5 (47cm)
Okhalweni: Amasentimitha angama-30.3 (77cm)
Ubude bengalo: Amasentimitha angu-19.7 （50cm）
Unyawo ubude: Amasentimitha angu-8.7 （22cm）
Usayizi Wokupakisha: 57.1*16.6*11.9 inches(145*42*30cm)